Mobile dating - amanani omhla we
Mobile dating – amanani omhla we
Mobile dating iinkonzo, eyaziwa njenge-cell dating, cellular dating, okanye iselula dating, ukuvumela abantu ukuba incoko, flirt, bahlangana, kusenokwenzeka kuba romantically obandakanyekayo ngo kuthetha umbhalo messaging, mobile chatting, kwaye mobile web. Ezi nkonzo vumela zabo abasebenzisi ukuba unike ulwazi malunga kwabo ngendlela emfutshane inkangeleko apho mhlawumbi okuvimba zabo phones njengokuba dating i-ID okanye njengokuba igama lomsebenzisi kwi-mobile dating site. Banako ke ukukhangela amanye IDs-intanethi okanye nge-ubizo ethile inombolo yefowuni dictated yi-nkonzo. Le nkqubo ziquka ubudala, isini kunye ngesondo preference. Idla ezi ziza bakhululekile ukusebenzisa kodwa esezantsi umbhalo messaging imirhumo babe kwakhona isicelo ngokunjalo encinane imali – dating inkonzo imirhumo ngamnye umyalezo. Mobile dating websites, ukuze ukwandisa amathuba ntlanganiso, ugqaliso ingqalelo kwi abasebenzisi ukuba wabelane efanayo loluntu womnatha kwaye proximity. Ezinye iinkampani nkqu kunikela iinkonzo ezifana homing izixhobo ukuba ulwimi abasebenzisi xa omnye umsebenzisi ngaphakathi amathathu iinyawo zabo omnye nomnye. Ezinye iindlela involve i-Bluetooth iteknoloji ukuba ukunxulumana lwabasebenzisi iindawo ezifana iinkwenkwezi kwaye uncwadi. Oku kwaziwa njenge proximity dating. Ezi iindlela ingaba ngqo ngakumbi ethandwa kakhulu kwamanye amazwe Aseyurophu kwaye Asia kwe-intanethi dating. Ne-advent ka-GPS Phones kwaye I-ubulali, proximity dating kukuba sifuna kuvuka sharply kwi-popularity. Ngokunxulumene-Firefox Francisco Chronicle, ‘Mobile dating ngu elandelayo enkulu ezimnqakathi kwi-intanethi socializing.
yezigidi iselula abasebenzisi ushicilelo oluneenkcukacha kwi mobile dating zephondo kwi-Matshi, kunye abasebenzisi abaninzi falling kwi-phantsi kweminyaka umqolo. Abanye ingcaphephe kukholelwa ukuba kuvuka kwi-mobile dating ngu ngenxa lokukhula popularity ka-intanethi dating. Abanye bakholelwa kubalulekile zonke malunga oyikhethileyo, njengoko Joe Brennan Omnci., usekela kamongameli umongameli we Web umhla athi, ‘ngu malunga zinika abantu oyikhethileyo. Baya akunayo ukuya kumhla zabo ikhompyutha. Banako kumhla zabo handset, ke zonke malunga ikuvumela abantu isigqibo sokuba yeyiphi indlela elungele bona. ‘A kutshanje ipapashwe nzulu ibonisa ukuba ngoku. yezigidi icacile kwi-UK ukukhangela a iqabane lakho i-intanethi rhoqo ngenyanga. Oku sele ebalulekileyo yandisa ukususela (.
Oku kwanda ngu allegedly yintsholongwane Mobile Dating ngenxa ekhoyo kwintlalo dating iinkonzo njenge Tinder okanye Ividiyo Dating, eya kuvumela abantu ngokukhawuleza yenza entsha nabo kwi-hamba. Unyuko ka-mobile dating balaseleyo, dating app Tinder itshintshe indlela abantu kuhlangana enokwenzeka partners kwaye umhla. Abanye bakholelwa ukuba proliferation ezinjalo apps sele fueled bale mihla dating behaviors. Abanye uphephe ezi iinkonzo kuba uloyiko ukuba iteknoloji ayikwazi kusetyenziselwa electronically harass abasebenzisi. Omnye umba ngu ‘asymmetry ka umdla’, mna. e. nabafana ilungu ufumana excessive attentions kwaye amagqabi, ekusenokwenzeka ukuba iziphumo deterioration ka-ubulungu. E-Umhla Mobile Dating Inkomfa, yokuqala ngonaphakade consumer ugqaliso iqela kwimfonomfono dating apps unanimously reiterated efanayo izikhalazo ezivela eminyaka phambi. Bonke abathathi-nxaxheba kokuba abanye yethutyana malunga umngcipheko. Ezi yethutyana varied phakathi abathabatha inxaxheba kwaye oku kubandakanya yesitalato, yeemvakalelo zakho kwaye ngesondo imingcipheko, umngcipheko ekubeni scammed, umngcipheko encountering ezinobungozi kunye dodgy abantu, umngcipheko pregnancy, imingcipheko ukuba usapho, umngcipheko lies kwaye hlawulela. Ukuba isibali ezi imingcipheko, abathathi-nxaxheba undertook ezahlukeneyo imisebenzi ukuba wenza ukusebenzisa technological zokusebenza ezikhoyo kubo kwaye kanjalo assessed njani abanye baye okanye akazange sebenzisa ubugcisa. Ungena ezahluka-hlukileyo-era kunye ezininzi technological advancements ‘techno ngesondo era’, sisose faka ezahluka-era ka-dating ngakumbi ‘sexualized’. Mobile dating waqalisa ukwenza imilo. Umntu onegunya lokusebenzela omnye Dating yayiyenye lokuqala dating iinkonzo usebenzisa i-Bluetooth. Kwi-Thelekisa, Web umhla kwaye Lava ubomi ngabona mobile dating phambi kwexesha iinkokeli. Oko akusebenzi khange de iPhone bafika ngaloo mobile dating wathabatha ngaphandle. waba unyaka mobile dating wokuba mainstream. Iqala kwi, mobile dating wenziwe thatha overtaking-intanethi dating. Thelekisa kwaye POF ngoku khangela phezu zabo log-ins esiza ukusuka mobile phones. I-mobile dating kwimakethi kulindeleke ukuba zikhule ukuba $. B ngumthetho. G Dating ngu ezivelayo njengoko G nezo ze-Ividiyo Mobiles kuba ngaphezulu widespread. Kwezo meko kuba one-to-one ividiyo ubizo inika enye nokhuseleko kunye ngokuphonononga iqinisekisa amalungu ingaba lokwenene. Kwi-dating yentengiso, zombini i-intanethi dating zephondo ingaba ukongeza mobile web iinguqulelo kwaye izicelo phones. Abanye zephondo ingaba wanikela njengoko mobile kuphela kuba Phones kwaye Pads, kunye akukho ukufikelela web iinguqulelo. Mobile dating apps kwimakethi ngu uqikelelo ukuba abe kukunceda kakhulu $. bhiliyoni’. Tinder wenziwe ukuya kwi-mat ethengisela oku kwimakethi ‘njengoko ka-oktobha, i-app sele ngaphezu amahlanu ezigidi abasebenzisi’ kananjalo kubalulekile valued ‘naphi na kwi $ yezigidi $ bhiliyoni’. Sisebenzisa experiencing a eziquqa kakhulu ’emelweyo / etolikwayo ukukhula’ kunye uninzi lwezi dating websites idala apps dibanisa dating apps yedwa zonke ekubeni kusetyenziswa nge-mobile icebo
← Dating kwaye i-intanethi budlelwane nabanye
Omnye-stock exchanges kwi-USA: i-Intanethi Dating ukusuka Emelika →